Akhriso:-Soomaaliya Waa Dal Aan Ciidamo Laheyn Haddi Ay AMISOM Baxdo Al-shabaab Ayaa Qabsaneysa” | Saadaal Media
Akhriso:-Soomaaliya Waa Dal Aan Ciidamo Laheyn Haddi Ay AMISOM Baxdo Al-shabaab Ayaa Qabsaneysa”
Majaladda Mareykanka ah ee Foreign Policy ayaa qortay in Soomaaliya ay tahay dal aan ciidamo laheyn, iyada oo intaas raacisay in golaha ammaanka uu waqtiga u kordhiyey AMISOM ilaa May 2019-ka, todobaad guhadiisna ayaa caasimadda ka dhaceen 2 qarax, laguna dilay ganacsade taasoo soo dedejisay in wax la iska weydiiyo amniga magaalada Muqdisho.
Majaladda oo qoraalkeeda sii wadato waxaa ay leedahay AMISOM waxaa ay joogtay Soomaaliya ilaa 2007-dii, waa 22,000 oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya, Djibouti, iyo Sierra Leone, waxaa ay kaalintooda noqotay ka hortagga falaagada iyo inay taageeraan oo ay xoojiyaan ciidamada Soomaalida.
Colonel dalka Uganda ah oo la hadlay Foreign Policy waxaa uu yiri “Somalia waa sida doofaarka oo kale” isaga oo intaas raaciyay ” Haddii aad nadiifiso wasaq ayuu ka sii qaadaa” Colonel-kan waxaa uu leeyahay Soomaaliya waa sida Afgaanistaan oo kale, haddii ay ciidamada isbaheysiga ka baxaan waa fududahay inay Dhaalibaan qabsato, xaqiiqo taasi la mid ah ayaa Soomaaliya ka jirta, waxaa sidoo kale uu shaki geliyay in ay bixi-doonaan AMISOM mustaqbalka dhow.
Foreign Policy waxaa qoraalkeeda ku jira in Soomaaliya ay 11-kii sano ee la soo dhaafay aheyd waddanka kaalinta 1aad ugu jira ama ugu musuqa badan caalamka, taasoo ka duwan sida lagu yaqaaney sumcadda dalka oo mar ahaan jiray “libaaxyada Soomaaliya”.
Qoraalka waxaa ku jira sidoo kale inkasta oo la xiray xerada tababarka Imaaraadka in ay saldhigyo Muqdisho ku leeyihiin Turkiga, Qatar, Ingiriiska oo saldhig leh Baydhabo, Mareykanka oo heysta Balli-doogle tababrna siiya Danab, waxaa intaas dheer saraakiil tababar oo ka socda Masar iyo Suudaan oo jooga Xamar iyo shirkado amni oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Foreign Policy oo la hadashay khubaro xiriirka caalamiga ku taqasusay waxaa ay sheegeen in Mareykanka ay mar waddo sameeyaan qorshe fashilan oo lagu tababarayo ciidamada, horay waxaa ay ugu fashilmeen Afgaanistaan iyo Ciraaq, haddana Soomaaliya.
Majaladda Foreign Policy waxaa ay leedahay ma cadda halka ay Soomaalida hubka ka helaan, Mareykan, UK iyo midowga Yurub ma siiyaan hub wax dila, Khaliijka iyo Masar ayaa si cad hub uga iibiya. Halkii la rabay in hubkaas bakhaarada ciidmada lagu keydiyo, oo qeybaha ciidamada ee gobollada loo qeybiyo hubkaas waxaa loo leexiyaa beelaha halka qaar kalana lagu iibiyo suuq madow.
Cabdi Casis Xildhibaan, lataliyihii wasaaradda amniga oo la hadlay Foreign Policy waxaa uu ku doodayaa in Al-shabaab ay ku dhex jiraan hey’adaha xukuumadda, oo ay labada dhinac la qaraabtaan. Arrintan lagu dhex-jiro waxaa ay isku dheeli-tirnaan la’aan u keeneysaa dowladda.
Lataliye wasaaradda gashaandhigga Soomaaliya ah ayaa waxaa uu Foreign Policy u sheegay “Ma aha sir qarsoon in xubno ka tirsan xukuumadda iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay kireystaan Al-shabaab si ay u dilaan ama u aamusiyaan dadka fikir ahaan ka soo horjeeda”.
Majaladda Foreign Policy waa laga leeyahay dalka Mareykanka, waxaana la aasaasay 1970, waxaa ay ka faalootaa arrimaha caalamka.